Guddoomiyaha Aqalka Sare oo shir uga qayb galaya K/Koofureed – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u amba baxay magaalada Seoul ee Caasimadda Kuuriyada Koofureed. Wafdiga Guddoomiyaha ayaa waxaa ka mid ah Wasiiro, Xildhibaano iyo Senatoro waxaana lagu wadaa in ay Soomaaliya ku matalaan shir caalami ah oo ka dhacay Seoul.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdigiisa ayaa ka qayb galaya shir caalami oo ay isugu imaanayaan Baarlamaanada aduunka, Wasiiro, Siyaasiin iyo Madax kale. Madaxda Soomaaliya shirkaas uga qayb galaya ayaa khudbad ka jeedin doona Seoul waxayna kaga hadli doonaan Xaaladda Soomaaliya.
Shirkaan ka furmaya Seoul Caasimadda Kuuriyada Koofureed ayaa waxaa looga hadlaya Nabadda Aduunka, Soomaaliya oo ka mid ah wadamada ay xasaraha ka jiraan ayaa kamid ah wadamada lagu soo hadal qaadi doono shirka.